Kedu ihe kpatara ụtụ igwe kwụ otu ebe na Oregon? - Bgba Ígwè
Isi > Bgba Ígwè > Taxtụ bicycle - ngwọta pragmatic
Taxtụ bicycle - ngwọta pragmatic
Kedu ihe kpatara ụtụ igwe kwụ otu ebe na Oregon?
Ndị ome iwu kereigweexcisetaxna 2017, dị ka akụkụ nke $ 5.3 ijeritaxngwugwu nke ga-akwụ ụgwọ maka mmelite njem gburugburuOregon.Namkpokọta StreetsblogUSA akpọrọyaa 'okwu ụghaụtụ igwe kwụ otu ebenke na-emezu ebumnuche njem njem ọ bụla belụsọ na-egbochi agụụ ọhụrụanyịnya igwe.Dec. 12 2018
Hụ supercar na mmadụ dị obere, mana ị hụla na mgbe ọ bụla ị hụrụ otu n'ime ọhịa, ọ nwere akwụkwọ ikike Montana ma ọ bụ Vermont? Gini mere eji edebanye aha ụgbọ ala ndị a na steeti ndị a? Hà bụ ogige ụtụ isi? Hà Bụ Ezigbo Drigbọ Ala Ọchịchị? Vermont na Montana bụ naanị steeti dị ka nke a? Bịakwute anyị ugbu a ka anyị chọpụta ihe kpatara eji edebanye aha supercars na steeti onye nwe ya nwere ike ọ baghị na otu esi enyere ha aka na mbụ. M hụrụ n'anya akwụkwọ ikike. N'ebe a na US steeti ọ bụla nwere nke ya, ya mere ọ dị mfe ịchọpụta site n'ụgbọ ala steeti.
Mana ihe ị nwere ike amaghị bụ na ụfọdụ akara akwụkwọ ikike ahụ ị hụrụ anaghị arị elu. N'ezie, ọtụtụ oge mgbe ị hụrụ Supercaror RV na akwụkwọ ikike Montana, ọ bụ n'ezie onye bara ọgaranya sitere na steeti ọzọ. Onye chere na ha ka gị mma? See hụrụ, mgbe ị na-eme nnukwu zụọ, dị ka a $ 3.3 nde Bugatti Chiron Sport, na ahịa tax nwere ike ịbụ mara mma doozy.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ibi na LA, ị ga-akwụ ihe ruru $ 315,000 na ụtụ na ụgwọ. Gịnị ma ọ bụrụ na m gwa gị na ị nwere ike ịzụta otu Bugattian $ 3.3 ma kwụọ ụgwọ naanị puku dollar ole na ole maka oge ị zụtara ya na Montana.
Ndi oro ekpedi n̄kpọ ọnọ fi? N'ezie ọ bụ. Nwere ike iji $ 314,000 fọdụrụnụ iji zụta akwụkwọ mposi karịa ma ọ bụ ihe ọ bụla bara ọgaranya nwere ike iji ego ahụ mee. Ọ bụrụ na m bara ọgaranya, m ga-azụta ákwà mgbochi flannel.
Ihe kpatara nke a bụ na Montana enweghị ụtụ ahịa. Oregon, Alaska, Delaware, na New Hampshire anaghị akwụ ụtụ, mana Montana kachasị mma n'ihi na ha bụ naanị steeti anaghị achọ nyocha ụgbọ ala. Montana achọghị nyocha anwansi, ma ị nwere ike ịtụgharị kol na-enweghị atụ ụjọ imegwara.
Ihe a niile pụtara na ị nwere ike ịzụta ụgbọ ala na Beverly Hills ma kwụọ ụgwọ ya na 1,274 kilomita site na-enweghị taya ụgbọ ala na mpụga 90210. Nke ahụ anaghị ada ụda nke ọma, ka ọ na-eme? Ma ọ ga-eju gị anya. Ọ bụ ezie na ọ bụ iwu na-akwadoghị? Onweghi ihe ichotara adreesị onye nwe ya.
Ọ bụ ihe megidere iwu ịmepe ụlọ ọrụ igbe ozi na Montana, zụta ụgbọ ala ma ọ bụ RV site na ụlọ ọrụ igbe ozi ahụ, wee rụọ ya na steeti ọzọ. N'ezie, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na Montana nwere ike inyere gị aka ime nke ahụ. Naanị mepụta aha adịgboroja mara mma dị ka Nolan Syke's Cyclery, ma jiri okwu mkpịsị ụkwụ aka 'Anyị hụrụ Syke's Cikes n'anya' ma ọrụ ahụ na-elekọta ndị ọzọ dịka adreesị nzipu ozi na ihe ọ bụla.
Mana naanị ịdọ aka na ntị, ọ bụrụhaala na nke a bụ Teknụzụ, ụlọ ọrụ mkpuchi abụghị ndị na-akwado usoro a. Omenala mkpuchi akpaaka nwere ike jụ ịkwụ ụgwọ nkwupụta ma ọ bụrụ na ọ nwere ike igosi na ụgbọ ala dị na mpaghara dị iche iche karịa iwu akpaaka edepụtara arsgbọ ala na steeti dị iche iche iji chekwaa ego. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ibi na New York ị ga-akwụ ihe dị ka $ 1,789, mana ọ bụrụ na ị pịa ụgbọ ala gị na Vermont ma ọ bụ New Hampshire, ị ga-akwụ ihe dị ka $ 1,100 maka mkpuchi.
Smart. Ihe ọzọ kpatara na ụfọdụ ndị ji enwe ụgbọ ala ha na steeti ndị ọzọ nwere ụkpụrụ ikuku. Were ya na ịchọrọ ịzụrụ Uncle Ronnie ejiri C7ZR1.
Ugbu a, Uncle Ronnie bụ ụdị nwoke na-enwe mmasị n'ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, mkpụkọ ahuekere n'ala na ike ọgwụgwụ nke na-ada ụda dị egwu mere ka ọ chọọ itinye ihe ole na ole si na nsị ya nke nwere ike ime ka ụgbọ ala ahụ daa ule California. Ihe a ga-eme? Mfe. Kpido kuki ahụ na Vegas, nke nwere ụkpụrụ ikuku anwuru dị ala, wee kwaga ya na California.
Ngọnarị, abughi m onye ọkaiwu yabụ enwere ike. Amaghị m. Ma otu ị maara, nke a abụghị ihe California.
Onye nọ na Pennsylvania nwere ike ịchekwa ego na ụgbọala obere polar bear enyi na enyi ụgbọ ala ma ọ bụrụ na akara na Ohio Ọ bụrụ na ị bi na New Mexico, ị nwere ike ịga Texas. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bi na Hawaii ị na-achọgharị ma ọ bụrụ na ị bi na Hawaii, ma ọ dịkarịa ala ihe nkiri ahụ dị mma site na mbadamba ala, mana gịnị banyere efere n'èzí nke ókèala, hmm? Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ịhụ akwụkwọ ikike ikike sitere na mpaghara US dị ka US Virgin Islands, ụfọdụ ụgbọ ala ndị mara mma si na mpaghara US. Nke ahụ bụ n'ihi na ị nwere ike ibubata ụgbọ ala na mpaghara ndị ị na-enweghị ike ibubata na US, nke a bụ kicker, ọ dị mfe mbubata ụgbọ site n'otu mpaghara US karịa mba ọzọ.
uru nke obi chiiz
Karịsịa, ọ bụghị ya? Ugbu a ụzọ kachasịsịsị esi enweta ụgbọ ala ahịa dị egwu nke na-erughị ụkpụrụ US bụ ichere afọ 25 site na ule ọnwụ, ọkụ ọkụ ọkụ n'akụkụ, ọkụ ihu, mgbịrịgba nchekwa, blah, blah, blah. Anyị mere ya, ọ dị m ka isiokwu 10 n'otu isiokwu ahụ. I nwekwara ike gbanwee ụgbọ ala a iji nwee ihe ndị a niile, na-arụ ụka na ọ dị ka ụgbọ ala dị na ahịa US, ma ọ bụ tinye maka mgbakwunye 'Gosi na Ngosipụta'.
Mana nhọrọ ndị a niile nwere ike ịbụ ihe ijuanya karịa karịa ike ha. Kedu ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ụgbọ ala na-akwadoghị dịka Land Rover Defender 110 na Oklahoma? You nwere ike ịzụta nke karịrị 25 afọ ma na-efu ihe dị ka € 125 Grandor nwere ike ịzụta otu maka 60 dị na UK wee jiri nnukwu ego ọzọ na 15 na mbupu na mbubata mbubata iji nweta bisikiiki unicorn na US - Flag of Virgin Agwaetiti. Ọ bụghị naanị na ị na-echekwa 50,000, ị ga-enweta ụgbọ ala ka mma.
Dị ka ihe atụ doro anya, anaghị m egosi! Na-atụ aka na onye ọ bụla. Nke ahụ bụ naanị otu ihe atụ. Onweghi onye mere nke ahụ.
N'oge a, m chọrọ ichetara onye ọ bụla na ebe a na Donut anyị anaghị anabata ndebanye aha na-akwadoghị ma ọ bụ mkpuchi nke ụgbọ ala. N’ezie, ọ dị mma ịmara na ịnwa ịgafe ụtụ isi, ego ịnshọransị, na ule anwuru pụrụ imenye gị ụjọ n’ezie. Chegodi gabiga nsogbu ịzụrụ Defender 110 wee nwude gị.
Ọbụghị naanị na ị ga - eche nsogbu okwu, enwere ezigbo ohere Johnny Lawis ga - akụda Land Rover na nchacha njedebe dị ka 94 Sunfire. Na nke ahụ ga-agbawa obi. Na ngwụsị nke ụbọchị ahụ, ị ​​na-ekpuchi ụgbọ ala nwere akara ikike na mpụga steeti, ma ọ bụ n'okwu ndị dị oke njọ na mpụga ókèala, nwere ike ọ gaghị aba uru ọ bụla ma ọ bụ isi ọwụwa, mana dabere na onye nwe ya, ụgbọ ala ya, na ebe obibi, ụfọdụ ihe ọ juụ deliciousụ na-atọ ụtọ. enwere ike ịba ya - Oh, ị tụfuru oge nnyefe maka ezumike ahụ? Oh nsogbu adighi.
Na-ewebata kaadị onyinye dijitalụ nke nwere nọmba na kọmpụta ahụ, nye ya ịhụnanya gị ma nwee olile anya na ị ga-ama jijiji gị na ọnwa Jenụwarị. Aga m agwa gị ozugbo, ọ bụrụ na ndị mmadụ akwụ Bugatti $ 3.3 ha maka ụtụ ahịa ha, okporo ámá anyị na LA nwere ike ọ gaghị adị ka nke a (peep).
Kedu maka? Naanị ụgbọ ala m ga-eme maka ihe ọta mpaghara a bụ Alpine 110, nke ọhụrụ. Ọ dị ka ụgbọ ala French na-azụ azụ. Nnọọ ọrịa.
Might nwere ike ime nke ahụ oge ọzọ.
Buyingzụta ụtụ ịnyịnya ígwè
Zụta igwe kwụ otu ebema ọ bụrụ na Are na-Onwe Gị n'ọrụ
I nwere ike ikwu maka ụgwọ nkeigwena ụtụ isi gị site na iji ego ego. Ma oburu n’icho ime ihe a igaghi enwe ike iri onu ego nke 20p mana igha eri ego mmezi na mkpuchi.Eprel 15 2020
Enwere ihe ise echere m na ị kwesịrị ịma maka ọbịbịa ụtụ isi eletrik eletrik 30% na-abịanụ. Ee, nke ahụ bụ oge zuru oke maka US Air Force, US Air Force. Anyị enweghị ozi niile.
Ihe niile anyị nwere gbadoro ụkwụ na nke a pịa ebe a, ọ bụ naanị peeji abụọ. Enwere m ike ịgụrụ gị paragraf mbụ. Ọ na-agụ, sị: 'Taa, Congressman Jimmy Panetta na Onye isi oche nke Black Caucus of Congress Earl Blumenauer malitere Kickstart Na-agba ume maka Bikes Electric maka Environment.
Nke ahụ pụtara maka e-igwe kwụ otu ebe. Smart. Iwu ahụ kwadoro iji igwe eletriki ma ọ bụ igwe eletrik site na akwụmụgwọ ụtụ isi nke ndị ahịa dabere na ogologo, ọsọ na ịdị mfe nke ha nwere ike ịga.
Nke ahụ dị mfe! E-igwe kwụ otu ebe ga - enyere aka dochie njem ụgbọ ala na ịgbagharị ma belata ikuku CO2. Ihe kachasị mkpa anyị nwere ike ịmepụta bụ n'ezie ikuku CO2. Ma na paragraf a buru ibu ebe a bu ihe jikọrọ ihe omumu na ya.
Ihe omuma ndi ozo edeputara bu isi okwu sitere na ulo oru ndi gbara gburugburu obodo a na akwado 30% tax tax. Nkwupụta mgbasa ozi a enweghị ọtụtụ anụ ahụ ma ọ bụ ihe, mana m ga-ekekọrịta ihe ọmụma anyị ma tulee ntakịrị na m chere na nke a ga-eme. Nọmba otu.
Echere m na ihe kacha mkpa bụ ịghọta ya. Kedu ihe akwụmụgwọ ụtụ isi gọọmentị etiti? Ọ bụrụ na i jitụbeghị onye ahụ mbụ ọ nwere ike ịbụ ntakịrị mgbagwoju anya. Nke a ọ pụtara na ị ga-enweta mbelata 30% na ọnụahịa igwe kwụ otu ebe mgbe ịzụrụ ya? Mbanụ.
Ya mere, nke ahụ bụ ihe ị kwesịrị ịma. Kedu otu esi etinye n'ọrụ ma ọ bụ jiri nke a mee ihe? Ugbu a, mgbe ọ malitere ịdị irè, azụtala m ma gbazite ụfọdụ ụgbọ eletrik ma ha nwere ụgwọ ụtụ isi nke gọọmentị etiti. Yabụ amaara m etu usoro a si arụ ọrụ maka nke a.
Echere m na nke a ga-adị nnọọ ka ya. Ka anyị kwuo na ịnwere igwe kwụ otu ebe na-efu $ 1,500. Ga-enweta 30% dị ka akwụmụgwọ ụtụ isi.
Nke a pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ ọnụahịa zuru ezu nke igwe kwụ otu ebe. Mgbe ịzụrụ ya. Agbanyeghị, mgbe ị na-etinye ụtụ isi gị, ị nwere ike ikwu na ọ ga-adị mkpa ka ị dejupụta akwụkwọ ọhụrụ.
Ọ na-ekwu ebe a na azụrụ m igwe eletrik. Uru ahụ dị ka ndị a, anyị ga-enweta nbepu ma ọ bụ kredit mgbe ị na-etinye ụtụ isi gị. N'aka ozo, oburu na inwetara ugwo maka afo a, i gha enweta ego karia n'ihi igwe eletrik.
Ọ bụrụ na ị ga-atụ ụtụ isi, a ga-ewepụ otu obere akụkụ nke ụgwọ ahụ. Yabụ na ị naghị enweta ụtụ isi ụtụ isi mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe, mana ị na-enweta elele mgbe ị debara ụtụ isi gị. N'ihi ya, m na-achọ ịmata ma nke a ọ ga-eme ka ahịa igwe na December.
Ọ bụrụ na anyị nwere ndị na-anwa igbutu ụtụ isi ha ma tụlee igwe ele e-bike na nke ahụ nwere ike ịkwanye ha na njedebe tupu njedebe nke afọ. Nọmba nke abụọ: enwere oke ego kachasị ego ị nwere ike ịlaghachi. Ma nke ahụ bụ $ 1,500, nke dị ọtụtụ.
Yabụ na ọ bụ 30% ma ọ bụ $ 1,500. N'ezie, m ga-eme obere mgbakọ na mwepụ ma chọpụta ihe kacha mma ọnụahịa-arụmọrụ maka igwe eletrik. Y’oburu n’itinye ego iri abuo na ano ugbua, aga m etinye obere onyinye.
Yabụ kedu onyinye? Inye ego akwụmụgwọ a dị. Yabụ ọ bụrụ n'ịzụrụ igwe kwụ otu ebe $ 5,000, ụgwọ ahụ na-arụ ọrụ iji nweta gị $ 1,500 zuru ezu. Ga-akwụ ụgwọ ọnụahịa igwe kwụ otu ebe a ruo $ 3,500 mgbe ị dechara ụtụ isi gị.
Nke ahụ bụ ahịa m chere ma ọ bụrụ na nke ahụ ga-aga nke ọma. Yabụ ego kachasị mma maka ego gị bụ e-bike $ 5,000. Jiri ego ụtụ isi zuru oke.
Nke ato, enwere oke di elu. Mgbe ị na-emefu ego ahụ, ị ​​chọghị ego akwụmụgwọ ụtụ isi. Ma nke ahụ bụ okpu nke $ 8,000.
Yabụ ọ bụrụ na ị zụta stealth bomber nke ahụ bụ $ 10,000 ọ gaghị agụta n'ihi na ọ bụ oke ego. Ebe ọ bụ na ekwuru m igwe kwụ otu ebe na nke ahụ ga-agabiga oke, ekwuru ya na ọ ga-emetụta igwe kwụ otu ebe nwere ike nke 750 watts ma ọ bụ obere. 750 watts.
Nọmba nke anọ. Enwere okwu na-edochaghị anya na-ekwu na nke a metụtara ego dị ala. Ọ naghị ekwu ihe nke ahụ bụ ma ọ bụ ihe ọ pụtara.
Yabụ na enwere ike ịnweta ụdị akụ na ụba ebe ị na - agaghị erite uru na nke a. Naanị ihu ala nke m hụrụ n'onwe m bụ na 90% gaa na 95% nke ndị ahịa m lara ezumike nká ma ọ bụ lara ezumike nká. Hà ga-erite uru na ya? Karịsịa: enwere oke ego? Amaghị m, mana anyị ga-echere wee hụ ihe n'ezie n'ụgwọ ahụ n'ihi na anyị enwetabeghị ederede a.
N'ikpeazụ, nke ise, gịnị ka nke a ga-eme n'ahịa igwe eletrik? Enwere ụkọ. Anyị enweelarị nsogbu ịnweta akụkụ na akụkụ. Yabụ ọ bụrụ na enwere ụtụ isi ịzụta, ọtụtụ mmadụ ga-azụrụ igwe eletrik eletrik? M kwuokwa, ee, nke ahụ nwere ezi uche.
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-akwado ụgwọ a tupu akwụkwọ akụkọ pịa. Yabụ n'ụzọ doro anya enwere mkparịta ụka dị ukwuu n'azụ azụ. Ejiri m ekwentị kpọtụrụ gị.
Agbalịrị m ịkpọ ụfọdụ òtù dị na ndepụta nọmba ekwentị. O di nwute na, ọ dịghị onye n'ime ha wepụrụ ya mere enweghị m ike ịchọpụta ihe ọ bụla ọzọ nkọwa. Agbanyeghị, echeghị m na ọ bụ ihe ndabara na naanị izu ole na ole gara aga, Rad Power welitere $ 150 nde na ego itinye ego.
Ọ dị m ka ọ dị m ntakịrị ka otu nnukwu ego batara na nnukwu ụlọ ọrụ e-igwe kwụ otu ebe. ụbọchị ole na ole tupu akwụ ụgwọ ụtụ isi gọọmentị etiti. Ikekwe nke a abụghị ihe niile kpatara nke a, mana ọ ga-abụ na ọ bụ ọgwụgwọ, echere m na nke ahụ ga-eme? Eeh.
Enwere m echiche ọ bụla mgbe ọ ga-eme? Ụzọ adịghị. I choo izu e-igwe aga m ekwu otu ihe. Echela.
Agaghị m echere ka ọchịchọ a dị elu. Ngwaahịa dị ala ma ọ ga-abụ ihe ịma aka maka afọ na-esote ma ọ bụ karịa. Na nke ahụ ga-eme ka ọ sie ike karị.
Ahụla m ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-ekwu, gịnị kpatara anyị ji ewebata mbelata ụtụ isi 30% na igwe eletriki eletrik mgbe ha si na China? Nke ahụ enweghị uche. Ọ dị ka inye nkwado maka imepụta China. E nwere ọtụtụ echiche dị iche iche banyere ma nke a ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ n'ozuzu ya.
Enwere m ike ịsị na anyị ji nwayọ nwayọ na-arụ ọrụ ma na-emepewanye ngwaahịa ndị US. USA! USA niile! A rịọwo nke a site na email ọtụtụ oge ma ọ kabeghị na ọwa m. Mana ọtụtụ n'ime gị nwere ike iche n'echiche ihe nke a ga-abụ.
Anyị na-ewulite mmepụta ebe a. Anyị na-eme nke a ebe a na ụlọ na Bolton Ebikes. Ma ozugbo anyị wulite ọkọnọ, a ga-ere ha ere.
More na n'oge na-adịghị anya, anyị mechara nwee jaket aka na ngwaahịa. Enyochare m ngwaahịa a n'oge gara aga. Enwere oge maka ụdị emelitere ọhụụ ga-enwe isiokwu dị iche iji gosi gị mmelite ọ bụla.
Agbanyeghị, nke a bụ ngwaahịa ọzọ emere na USA. N'ikpeazụ, m kwuru banyere otu n'ime igwe WartHog n'ihi na ha nọ na mmiri ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a na US. Ọ bụrụ na ị ka na-achọ igwe eletriki eletrik, hụ na ị ga-elele isiokwu m ọzọ, Ihe 10 I Kwesịrị Knowmara Tupu yingzụta E-Bike, ebe ozi a niile na-aga n'ihu.
Nwere ike ịgba ọsọ maka ịgba ígwè?
Milejiọnụego maka ọgba tum tum na usoro okirikiri
Ndị ọrụ ngonwere ike ikwu agbaraenyemaka enyemaka (MAR) na njem azụmahịa na-eji nke haigwema ọ bụ ọgba tum tum na-esi na ebe ndị ahịa ha. Standardkpụrụ ọkọlọtọ metụtara ndị ọrụ ngo gbasara ebe ọrụ ha, dị ka iwu mmefu ọnwa 24 na iwu 40%.Ọgọst 21 2008
Funwe ume nke ọma bụ otu n’ime ihe ndị kachasị mfe ị nwere ike ime, mana ọ nwere nnukwu mmetụta na arụmọrụ gị. Ogologo njem gị, mmanụ dị mkpa dị mkpa. Mile ride, ma ọ bụ nnukwu, nnukwu egwuregwu ị na-akwadebe maka a ogologo oge, ma ọ bụ dị nnọọ a di na nwunye nke ogologo okpomọkụ draịva.
Anyị ga-egosi gị ihe ị ga-eri na mgbe ị ga-eri ya. Mana tupu anyị emee, hụ na ị debanyere aha na GCN ma ọ bụrụ na i nwebeghị, ma pịa akara mgbịrịgba maka ọkwa ma kwado ọwa ahụ. (Egwú Dramatic) - Ihe mbụ ị kwesịrị ịma banyere ịgbalite mmanụ maka ogologo njem bụ na nkwụnye mmanụ gị anaghị amalite mgbe ị nwetara ya na igwe kwụ otu ebe gị, ị ga-eche maka nri gị tupu njem ahụ wee malite na nke gị Eve. eri nri abalị.
Chọrọ iri nri siri ike, nke nwere nnukwu nri - ma eleghị anya ihe nwere pasta, osikapa, ma ọ bụ ọbụna quinoa. Ma emela ka mmejọ kpochapụla nke ị oụbiga mmanya ókè. Mgbe ị na-ebubata carbs bụ ihe dị mma, ị ga-achọ mejupụta nri ndị ahụ na-enye nri, mana iri nri abụọ ị ga-eri ga-eme ka ị nwee mmetụta dị umengwụ na ịda mba n'echi ya.
Gbalịa iri obere carbohydrates karịa ka ị na-eri; ị chọrọ n’ezie nri ụtụtụ, obere-abụba, obere nri GI. Ya mere, ihe dị ka porridge, Bires muesli ma ọ bụ oats na abalị ga-adị mma dịka ha bụ carbohydrates nwere obere GI, nke pụtara na a na-ahapụ nwayọ n'ike. Yabụ ị ga-enweta uru ya ogologo oge.
Chọrọ izere nri ndị nwere abụba ka ha na-egbu oge mmịnye carbohydrates dị ezigbo mkpa na sistemụ gị. Miri miri emi nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kachasị mma tupu njem buru ibu. (ngwa ngwa ngwa ngwa) - Ihe dị mfe na mbụ.
Ọ bụrụ n’ịga ogologo njem, weta karama abụọ. Ugbu a karama 750ml bara ezigbo uru mgbe ị nwere ike itinye ya na etiti gị. Nke a bụ n'ezie a 500, ma 750 agaghị dabara ọ bụla etiti, karịsịa y ma ọ bụrụ na i nwere a nta igwe kwụ otu ebe.
Mana n'ikpeazụ, usoro ị drinkingụ mmanya ị họọrọ ga-adabere n'ọnọdụ ndị ị na-anya - Mgbe ọ na-ekpo ọkụ, lekwasị anya n'inwe electrolytes na mmanya gị iji dochie mineral ndị dị mkpa ị na-efunahụ site na ọsụsọ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, mee atụmatụ opekata mpe otu tụọ aka na njem gị ebe ị nwere ike mejupụta karama gị. Ọzọ pro n'ọnụ bụ na-a electrolyte mbadamba na a ofụ ihe ọ mixụ mixụ mix gị n'akpa uwe ma ọ bụ saddlebag mgbe ị refilled gị karama n'oge okpomọkụ, n'ezie, m na-amasị mmiri na electrolytes na m karama iji jide n'aka na m mejupụta mineral furu efu na ajirija. Mana n'oge oyi ọ masịrị m ijuju karama ndị ahụ na ngwakọta carbohydrate ma jiri ụfọdụ ụdị ngwaahịa pụrụ iche, akpa nke mkpokọ carbohydrate, ị nwere ike ị nweta ọnụ ọgụgụ kachasị nke carbohydrates ahụ gị nwere ike ịmịkọrọ n'ime elekere.
Ihe kpatara nke a bụ na ha nwere ezigbo ngwakọta nke shuga ga-enye gị ohere ịnweta oke nke carbohydrates kwa awa, nke nwere ike ibu iji nyere gị aka ịmị ọkụ. (Techno music) - Were ezigbo nri soro gị mgbe ọ bụla i nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè. Yabụ ndị a nwere ike ịbụ flapjacks, osikapa achịcha, unere, ma ọ bụ ikekwe ọbụna obere sandwiches Ọ bụrụ na ị na-enweta usoro ịkwanye mmanụ ọkụ gị n'ụzọ ziri ezi, ị na-enwe ike ọgwụgwụ, agụụ na ikekwe ịfụ, mgbe ahụ otu n'ime ihe kachasị mma ị ga-eri bụ ume. jel.
N'ihi na gels ike nwere naanị ihe ịchọrọ: mmanụ, shuga. Ma nke ahụ dị mfe maka ahụ iji ahụ. N'iburu nke a n'uche, ọ dị mma mgbe niile iji were gels ole na ole soro gị gaa ogologo njem.
Mana ị gaghị achọ iri gels mgbe niile. Ha nwere otutu n’ime ha ma ha nwere ike! na-amalite ịbụ ezigbo ọrịa. Mana n'ihe gbasara ịnwa ịkwụ ụgwọ maka nnukwu ego a na - atụ ụjọ, gwa onye na - agba ịnyịnya agba nwere ọtụtụ oge onye ga - agwa gị na onweghị ihe dịka ya. (Techno music) - Ọ bụ a bit nke cliché, ma mgbe ị na-amalite na na? Yọ bụru ẹge ono bẹ dụ ụkporo ụnu ugbo labọ l'ụmadzu iri.
Ọ bụghị njedebe nke ụwa na njem dị mkpirikpi, mana ọ bụrụ na mmanụ agwụ, ikekwe ị gaghị anọ n'ụlọ. Ma were ya n'aka m, n'ezie, n'ezie, n'ezie, achọghị n'ezie ka ọkara ọkara site na mmanụ ọkụ na-agba ọsọ. Ọ dịghị fun.
Ntuziaka dị mma ma ọ bụrụ na ị nọ ogologo, nnukwu njem bụ iri carbs ọ bụla 20 nkeji ma ọ bụ ihe ọ bụla. Nke ahụ nwere ike ịbụ ọkara ogwe ike, gel ma ọ bụ achicha osikapa ma ọ bụ ihe yiri ya. Ihe m na-eme mara mma, m ga-eme ma chekwaa ụdị nri m chọrọ, wee buru akpa m.
Ma tinye mgbe niile tinye osisi ọzọ ma ọ bụ jelọl ọzọ ma ọ bụrụ na achọrọ m. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na njem ahụ dị ntakịrị karịa atụmatụ gị, ma ọ bụ na ị malitere inwe mmetụta na ị na-enwe mmetụta na-adịghị mma, nke a bụ amụma mkpuchi gị, ndị a bụ ihe nchekwa gị, nri nri mberede gị. Nwere olileanya na ịchọta ụdị nri a bara uru na ogologo njem.
ụmụ nwanyị anyịnya igwe
Ma ọ bụrụ ee? , biko biko nye isiokwu a nnukwu isi mkpịsị aka. Ugbu a, ị nweghị ihe ngọpụ ma ọ bụrụ na ị na-anabata ọzọ gị isii Epic. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ hydrated na ịke, gịnị mere ị ga-? Agaba na ulo ahia GCN nweta karama mmiri GCN Camelback.
Ọ bụrụ n’ịchọ ịhụ ụzọ ọzọ ị ga-esi dee akụkọ, pịa ebe a.
Oregon nwere ụtụ igwe kwụ otu ebe?
Site na uzo ato nke afo mbu ya,Oregon si$ 15igweexcisetax nweregbakwunyere $ 489,000 n'ime igbe nchekwa steeti. Nke ahụ dị ọtụtụ karịa ala ndị ọka ala na-atụ anya ya. Costsgwọ ọnụahịa karịrị ọnụ ahịa a na-atụ anya ya ma ọ nwere ike ịrịgo karịa karịa ka ndị isi na-agbakwunye ịgba mbọ mmanye.Dec. 18 2018
Enwere m ike ịdebanye ịnyịnya ígwè?
Ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala, fee, bọs ma ọ bụigwe kwụ otu ebemaka ọrụ, ị nwere ike tozuo maka mwepu ego ma ọ bụ nkwụghachi ego. You nwere ike iwepu ego mmefu ndị metụtara azụmaahịa kwa ụbọchị yana njem azụmahịa na mmefu ọgbakọ.Ọnwa Ise 20, 2016
You nwere ike imefu igwe?
Ị nwere ikena-ekwu na aigwedị ka azụmahịammefuna ụtụ isi gị na-enye ya naanị maka azụmaahịa ahụ.Would ga-emenke a site na ịsị na ọ bụ mmefu ego, n'agbanyeghị biko mara nke ahụọ bụrụhọrọ ịgbada n'okporo ụzọ a,ị ga-emeenweghị ike ikwu maka ọnụego ewepụghịmmefumaka njem site naigwe kwụ otu ebe.Sep 11 2015
Otu igwe kwụ otu ebe bụ ego akwụ ụtụ isi?
Nwere ike ịrịọ aigwedị ka azụmahịammefuna ụtụ isi gị na-enye ya naanị maka azụmaahịa ahụ. Ga-eme nke a site na ịza ya dị ka mmefu ego, ọ bụ ezie na biko mara na ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbada n'okporo ụzọ a, ị gaghị enwe ike ikwu na ọ gafere ọnụego ewepụghị.mmefumaka njem site naigwe kwụ otu ebe.Sep 11 2015
Enwere m ike ide igwe kwụ otu ebe maka ọrụ?
Ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala, fee, bọs ma ọ bụigwe kwụ otu ebe maka ọrụ, mgbe ahụ i nwere ike tozuo maka iwepụ ego ma ọ bụ kwụọ ụgwọ. may nwenwere ikewepụkwa ụbọchịazụmahịa- mmefu mmeghari yana yanaazụmahịa-aga na ogbako na-akwụ ụgwọ.Ọnwa Ise 20, 2016
Taxtụ isi ọ na-akpata bụ ụtụ isi ọnụ?
.B.akpụ-nchikota ụtụbụ otu n'ime ụdị dị iche iche ejiụtụ isi:ego mbata, ihe enwere (ihe onwunweụtụ isi), ego ejiri (ahiaụtụ isi), iche (excise.)ụtụ isi), wdg Ọ bụ nlọghachi azụtax, dị ka ala naego mbatabụ, na elu pasent nkeego mbatana ọdabara natax.
Kedu ihe a na-ahụta dị ka ụtụ isi onyinye?
Naụtụ onyinyebụ gọọmenti etititaxna-akwụ ụtụ isi nke na-enye onye ọzọ ego ma ọ bụ ihe ndị ọzọ bara uru, dị ka ihe onwunwe. Naụtụ onyinyemalite site na 18% gaa na 40%, dabere na nha nkeonyinye. Maka 2021, kwa afọonyinyemwepu bụ $ 15,000 maka onye nnata; ewepu oge niile bụ $ 11.7 maka otu onye nyere onyinye.
You na-akwụ ụtụ isi na okirikiri ịrụ ọrụ igwe kwụ otu ebe?
Ebe ọ bụ na ịkwụ ụgwọ gị kwa ọnwa na igwe kwụ otu ebe na-ebelata oke ụgwọ gị, ị ga-echekwa ụtụ isi na onyinye mkpuchi mba nke ị ga-akwụ na obere ego nke ụgwọ ịkwụ ụgwọ gị karịa oge nke nkwekọrịta Cycle to Work. Yabụ, maka onye na-atụ ụtụ isi bụ isi, nke ahụ ga-abụ pasent 32 nke ego nzụta.
Ebee ka m nwere ike ịzụta ịnyịnya igwe anaghị atụ ụtụ?
Na mgbakwunye, enwere atụmatụ ndị ndị na-ere ahịa igwe kwụ otu ebe dịka Halfords, Evans Cycles na Chain Reaction Cycles. Ọtụtụ ụdị ahịa dị ka Canyon na-abanyekwa na atụmatụ ma ọ bụ karịa.
Ego ole ka m nwere ike ịchekwa na ụtụ igwe eletrik?
Zọpụta 29.5% ma ọ bụ 49.5% si na ọnụahịa nke igwe kwụ otu ebe ruo 50 1250 maka igwe kwụ otu ebe na rue € 1500 maka igwe eletrik na-adabere na ụtụ ụtụ gị. Nwee ahụ ike ma nwee uru ahụike nke ịgba ịnyịnya ígwè na-arụ ọrụ - kilomita 16 dị ka calorie 800. Jiri obiọma na gburugburu ebe obibi ma chekwaa ego n'otu oge. na-agbakwunye! na ụtụ ụtụ gị.